Happy Whatsapp Unyaka Omtsha Status 2017 Happy Whatsapp Unyaka Omtsha Status 2017
Happy Whatsapp Unyaka Omtsha Status 2017
Wish wonke amaxesha yakho naxa umhlobo isangqa kwi whatsapp yeyona ndlela ilungileyo yokwenza ukuba bazi ukuba ucinga ngazo. Nyakhomtsha 2017 Whatsapp Ubume kunye Facebook Status. Zininzi iindlela ukuvakalisa iminqweno Year New, ngeendlela ezahlukeneyo ukuthumela imiFanekiso uNyaka oMtsha kunye Iminqwenelo uNyaka oMtsha.
Emihle kuba Happy New Year 2017 efuna nge Whatsapp, Viber, thatha uhambo olude lokusel'umoya, umgca, ngene, WeChat namaqonga ezininzi ngokohlobo imiyalezo kodwa unako ukuthumela uphindo best, imifanekiso, i-SMS, imifanekiso, iividiyo, nemifanekiso audio, imifanekiso HD. imikhosi ezintsha imibhiyozo ozithandayo wonke. Wonke kunandipha Unyaka Omtsha ngesimbo yabo nezikrelemnqa kwiindlela okanye kuxhentsa kwiiphabhu.
Best Unyaka Omtsha 2017 WhatsApp Iminqwenelo
"Le Unyaka Omtsha ndinqwenela ukuba uThixo yimvula kuni Iintsikelelo zakhe zibalaseleyo, Kwangaphambili akazange ekuthathela intw aqhaqhwa, Atap uyanibetha kunye notolo lwakhe endizikhumbulayo, Lady Luck abenzela impilo kunye nobutyebi, yakho Guardian Angel ugcina siphaphile yakho ingqondo eliqaqambileyo. "
"New ngunyaka, ezintsha amathemba, entsha isisombululo, entsha bangoomoya, kwaye entsha zifudumeleyo wam onqwenela nje wena. Yiba New Year "ethembisayo nobanelisayo
Nyaka omtsha 2017 Whatsapp Status
Owu wam endimthandayo, Libala ukoyika ur,
Mabagungqe bonke Dreams ur icace,
Ungaze ufake Krazula, Nceda Uve,
Ndifuna ukuxelela umntu into eUre Ear
Sikunqwenelela u "Entsha UNYAKA Banoyolo" kakhulu!
Unyaka Omtsha uzisa Ulonwabo nje Krazulani,
Wonke umntu othanda kuphela Wena Dear,
Zonke iingxaki zenu ziya kuba Ligqityiwe ......
Kungenxa unqwenela Special wam Unyaka Omtsha.
Ulibaleke r mzuzu ukubhiyozela kunye,
U r umhlobo wam ilungileyo & ngonaphakade,
Ndazise Miss U ngakumbi kule minyaka New,
Ithemba le 2017 kuzisa Ulonwabo kuwe Dear.
Akwaba ni Unyaka Omtsha 2017
2017 Happy Whatsapp Unyaka Omtsha Status
Ngomhla 1 January, xa iNyanga Icwangcisa kwaye ilanga,
ihlabathi kuvuka ukuya isifingo olutsha,
i Akwaba bonke abahlobo bam kunye nosapho ixesha elide kunye
ingqina 100 ekukhanyeni ezo. Nyakhomtsha 2017.
Ukuba izinto zihamba ngendlela yakho, awulibale wenu kunyaka ophelileyo njengoko ngephupha embi kwaye cinga enye zenu ezintsha umnxeba wakeup.
Ngamana kulo nyaka mtsha ukuzisa amathuba amaninzi indlela yakho, Ukuphicotha lonke uvuyo ebomini & Wabaguqukela onke amaphupha akho abe yinto & zonke iinzame zakho zibe nempumelelo enkulu.
Ndinithuma onqwenela unyaka sonwabe ezaliswe impilo, impumelelo, uthando imithwalo sasizonwabisa!
KuNyaka oMtsha iya kuba endala ukuba uqhubeka usenza izinto inye indala.
Cheers ukuya kunyaka omtsha elinye ithuba ukuba si yi ekunene.
Unyaka Omtsha lixesha ukutyhileka imimango ezintsha & aqonde amaphupha olutsha, sayifumana amandla & ukholo phakathi u, ukuba nemihlali ebumnandini ezilula & giya phezulu 4 mingeni emitsha. Sikunqwenelela obanelisayo ngokwenene 2017!
iminqweno yam wena, ekuqaleni Olukhulu Jan, Ukuthanda Feb, Uxolo ngoMatshi, Akukho iintsizi ngoAprili, Masonwabe ngoMeyi, Ndimbulele Juni ukuya Nov,Ulonwabo ngenxa Dec,Yiba lucky nomhle 2017.